Tattoo-ga nus-joogtada ah, ma jiraan mise waa khiyaamo? | Tattoo
Tattoo-ga nus-joogtada ah, ma jiraan mise waa khiyaamo?
Dad badan suurtagalnimada xaraashka semi-joogto ah waa wax aad u duufsan. Suurtagalnimada xirashada gabal noqon kara sida a tattoo Runtii laakiin adigoon si joogto ah u noqonin waa ku habboon tahay haddaanan hubin naqshadeynta, tusaale ahaan.
Laakiin, Ikhtiyaaradan ikhtiyaarradu ma yihiin xal dhab ah mise waa uun khiyaamo lagu soo jiidan karo kuwa aan taxaddar lahayn? Waan arki doonaa xiga.
1 Waxa ay ballan qaadayaan ...
2 ... iyo waxa run ahaantii dhaca
Waxa ay ballan qaadayaan ...
Tattoo-ga-Semi-joogto ah wuxuu ku saleysan yahay ballanqaadyo taxane ah. Waa jajabyo ballan qaadaya inay soconayaan lix bilood, sannad ama xitaa laba ama shan. Sharaxaadda "sayniska" ee dadka sameeya astaantan ayaa ah in khadku ku sii jiro lakabka ugu sarreeya ee maqaarka (maqaarku wuxuu leeyahay saddex lakab oo tatiyadu runtiina waxay galaan kan labaad) iyo inay iskeed u qasi doonto , Naqshadeynta ayaa si tartiib tartiib ah u libdhaysa illaa aan raad laga haynin.
Nidaamka ay ballanqaadayaan wuxuu aad ugu eg yahay taatuuga nolosha oo dhan, oo leh cirbado, khad (xaaladaha qaarkood la qasi jiray) iyo xanuun.
... iyo waxa run ahaantii dhaca
Sidaad qiyaasi karto, haddii hawshu ay la mid tahay taatuuga dhabta ah, waxaa jira wax aan ku habboonayn. Runta ayaa ah Suuragal maaha in la helo khadku si uu ugu sii jiro lakabka maqaarka maqaarkiisa oo xaalado badan buu gashaa ilaa tan labaad, goorma ayaad lahaan doontaa tattoo oo tirtira, haa, laakiin gabi ahaanba. Dhowr sano gudahood, Tattoo-ga-semi-joogtada ah wuxuu isu beddelay smudge joogto ah oo kaliya lagu saari karo laser.
Marka la soo koobo, maxaa Marka ay timaado sameynta tattoo waxaan heysanaa labo ikhtiyaar: kuwa kumeelgaar ah (cillaan, istiikarka iyo kuwa kale) iyo kuwa joogto u ah nolosha. Meel dhexe ma jirto.
Waxaan rajeyneynaa in mowduuca tattoo-ga-joogtada ah uu ku xiiseynayo adiga oo cadeeyay shakiyada qaar. Noo sheeg waxa aad u malaynayso faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Body Art » Tattoo-ga nus-joogtada ah, ma jiraan mise waa khiyaamo?
Nalalka Nalalka Waqooyiga